Maalinta: 28-ka July, 2018
Qaar ka mid ah xarumaha basaska ee Konya ma gelayaan Aladdin Boulevard
Qorsheynta Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalada Konya iyo Waaxda Nidaamka Tareenka, Alaaddin Boulevard si loo yareeyo cufnaanta taraafikada ee qadka basaska qaarkood ilaa albaabka Alaaddin la baajiyay. Qorshaynta Gaadiidka Dawlada Hoose ee Konya iyo Tareenka [More ...]
Daraaseynta Tilmaamaha ee Ankara Metro
Agaasinka guud ee EGO wuxuu fulin doonaa shaqooyin dayactir iyo horumarineed oo laga sameynayo qalab hoosaadyada nidaamka calaamadaha Ankara ee magaalada si ay u siiso adeeg hufan oo aan kala go 'lahayn muwaadiniinta Ankara. Sababo la xiriira daraasadahaan '28 July 2018' Sabtida [More ...]
Antalya Dawlada Hoose ee Magaalo Weyne Mashruuca Nidaamka Tareenka ee Marxaladda 3aad; Xadka waqooyiga ee qaybta Sakarya Boulevard inta udhaxeysa Yeşilırmak Street iyo Karatay Street waa laanta Gıyaseddin Keyhüsrev Storey Junction kuna xiran Sakarya Boulevard. [More ...]
Nidaamka Xakameynta Kaabayaasha Dhaqdhaqaaqa, kaas oo Dawlada Hoose ee Magaalada Mersin ay dejineyso muuqaalka PTT Junction bilowga 2018 oo ay heshay natiijooyin guul leh, waxay sii waddaa howlaha kaabayaasha ee Mersin oo dhan. Ka dib guushii demo ee Mersin [More ...]
Duqa magaalada Bursa Alinur Aktas, isagoo isla markaa saxeexaya xalalka wax ku oolka ah ee gaadiidka magaalooyinka isla waqtigaas, wadayaasha, inta lagu guda jiro safarradooda kuwaas oo siiya ajandaha, ayuu yidhi. Magaalad aad ufirfircoon oo Bursa ah [More ...]
Kaarka İzmir, Kaarka Balloonku wuxuu ka imaanayaa Daryeelka
Kuwa isticmaalaya gaadiidka dadweynaha Izmir, dhibaatada haysashada lacag ku bixinta kaararka smartka iyo raacitaanka inta soo hartay ”hoos ayey u dhacday taariikhda. Agaasinka Guud ee Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir ee ESHOT 30 Temmuz [More ...]
Mareeyaha Gaziray Ma Isku Diyaarinayaa Garoonka?
2018 Sanadka 3, kaas oo qiimeeya waxqabadka maalgashiga dadweynaha ee Gaziantep. Shirka Gudiga Iskuxirka Gobolka ayaa waxaa qabtay gudoomiye kuxigeenka gudoomiyaha Uur Aladağ. Isgoyska Qabuuraha, Gaziray sidoo kale waxaa ku jiri doona garoonka diyaaradaha [More ...]
Gaziantep Dawlada Hoose iyo Agaasinka guud ee buundooyinka wadooyinka oo la balaariyey buundada iyadoo ay ugu wacan tahay shaqada wadooyinka isgoysyada Qabuuraha 10 maalinta oo dhan waxaa laga bixin doonaa hal haad. Qorsheynta Gaadiidka Dowladaha Hoose ee Gaziantep iyo [More ...]
Ankara-Istanbul YHT Line ayaa loo furay in lagu tababaro tareenka
Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Agaasinka Guud ee Tareenka Waddooyinka ee Waddanka Turkiga, 61-65.Kilometer-ka saldhigyada Gulf-Gebze YHT ee Kocaeli waxaa si ku meelgaar ah looga raray 19.00 oo loo raaco taraafikada tan iyo XNUMX. [More ...]
Duullimaadyada diyaaradaha ee loo yaqaan 'YHT (Xawaaraha Xawaaraha Sare') ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay roobabkii ka da’ay Kocaeli iyo magaalooyinka ku xeeran. Baaxadda dhexdeeda, rakaab ku safraya jihada Istanbul ee xarunta Kocaeli Hereke ayaa ku guuldareystay roob dartiis dartiis. [More ...]
Maanta Taariikhda: 28 wuxuu tareenka koowaad u socday ilaa July 1939 Askale